माधव नेपालको रणनीति : सके ओलीलाई फ्याल्ने, नसके नयाँ पार्टी « AayoMail
माधव नेपालको रणनीति : सके ओलीलाई फ्याल्ने, नसके नयाँ पार्टी
2021,22 July, 2:41 pm
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको घोषणा गरेका छन्।
बालुवाटारबाट बालकोट सरेको दिन बार्दलीमा उभिएर ‘माधव नेपालजस्तो गद्दारका लागि पार्टीमा ठाउँ नरहेको’ बताएका उनले केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा बुधबार यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
विधानमै नरहेको दोस्रो अध्यक्षको व्यवस्थाका बाबजुद ओलीको त्यो घोषणालाई माधव पक्षले अल्मलाउने ‘अस्त्र’ को रूपमा अर्थ्याएकाे छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई माधव पक्षसहित पार्टीका २२ सांसदले विश्वासको मत हालेपछि एकताको पहलका लागि कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावको औचित्य पनि लगभग सकिएको छ।
यद्यपि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
देउवालाई विश्वासको मत दिएयता ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी छ भने माधव पक्षले पनि छुट्टै बैठक गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न चरणमा भएका माधव पक्षको बैठकले ओलीसँग एकता हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरू बताउँछन्।
ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन नसकिने ठहर उनीहरूले गरेका छन्।
माधवपक्षीय सांसद मेटमणि चौधरी अध्यक्षबाट ओलीलाई नफ्यालेसम्म एकता सम्भव नरहेको बताउँछन्। पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दल दुबै ठाउँबाट ओलीलाई हटाउने दिशामा आफूहरूको गृहकार्य भइरहेको उनले बताए।
चौधरीले १०-१५ दिनभित्रै ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइने दाबी गरे। ‘लगभग १०-१५ दिनभित्र केपी ओलीलाई हटाउनसक्छौं। उनी हटेपछि फेरि एमाले एक भएर अगाडि बढ्छ,’ चौधरीले आयोमेलसँग भने।
केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुर्‍याउँछौं, अध्यक्ष जो बने पनि हुन्छ। हामीलाई नै चाहिन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने,‘संसदीय दलको नेतामा पनि सुवास नेम्वाङहरू हुनुहुन्छ। उतैबाट बनाउँदा पनि भइहाल्यो। तर, ओलीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन हुन्न प्रमाणित भइसक्यो।’
कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट एकता, पार्टीप्रतिको आकर्षण र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा हुन नसक्ने भएकाले ओलीलाई हटाइने चौधरीले बताए।
ओलीलाई हटाउन सम्भव नभए वैकल्पिक ‘रोडम्याप’ पनि माधव पक्षले तयार पारेको छ। र, त्यो हो छुट्टै पार्टी दर्ता।
‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ओलीलाई हटाउने नै हो। त्यो सम्भव नभए वृहत कम्युनिस्ट एकताका लागि छुट्टै पार्टी खालेर अगाडि बढिन्छ,’ चौधरीले भने।
वृहत कम्युनिस्ट एकताको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले एमालेमार्फत् सम्भव नभए नयाँ पार्टी खोलेर छोटो बाटो प्रयोग गरिने जिकिर गरेका छन्।
‘ओलीलाई हटाएर एमालेबाटै वृहत कम्युनिस्ट एकता गर्न सक्छौं भन्ने छ,’ उनले भने,‘सकिएन भने छोटो बाटो अपनाउँछौं।’
ओली वा माधव जो सुकै भए पनि पुग्ने भने वृहत कम्युनिस्ट एकतामै रहेको जिकिर गर्दै चौधरीले एमालेलाई एकठाउँमा ल्याउन नसकिए सोझै अर्को बाटो समाइने उल्लेख गरेका छन्।
एमाले विधानमा एउटै अध्यक्षको व्यवस्था रहेकाले दोस्रो अध्यक्ष बनाउने कुरा भ्रमको खेतीमात्र रहेको उनले बताए।
‘विधानले एउटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। दुईवटा अध्यक्ष कहाँबाट हुन्छ। यो ओलीजीको ढाँट कुरामात्रै हो,’ उनले भने।
ओलीसँग एकता हुने सबै सम्भावना टरिसकेको बताउँदै उनले उनीबाहेकसँग मात्रै एकता हुनसक्ने जिकिर गरे।
‘ओलीलाई अध्यक्ष मानेर सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुँदा पनि चुनावमा धुलो चाट्ने नै हो,’ उनले भने,‘एकजुट भएर धुलो चाट्ने, उठ्नै नसक्ने कि कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन ओलीलाई बाहिर गर्ने? उपयुक्त विकल्पमाथि विचार गर्न जरूरी छ।’
ओलीबाहेक वृहत्तर कम्युनिस्ट एकता गर्ने विषयमा माधव नेपालको ‘रोडम्याप’ स्पष्ट रहेको चौधरीले बताए।
‘ओलीको अलमलमा माधवजी फस्नु हुँदैन। उहाँले रोडम्याप बनाइसक्नु भएको छ,’ उनले भने,‘सके ओलीबिनाको एमाले नसके नयाँ पार्टी खोलेर वृहत कम्युनिस्ट एकता गर्ने।’
सरकारमा सहभागी हुने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेको एमालेका माधव पक्ष सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। दलको विवाद नटुंगिएकाले सरकारमा सहभागिताका लागि उसलाई सकस परेको छ।
सरकारमा सहभागी हुन संसदीय दलबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ। जहाँ माधव पक्षको बहुमत छैन।
तर, सरकारमा सहभागी हुनअघिसम्म कि त एमालेको निर्णायक तहमा आफूहरू पुग्ने अथवा छुट्टै पार्टी खोलिसक्ने उक्त पक्षको बुझाइ छ।
‘सरकारमा त हामी जान्छौं। ६ महिनाका लागि स्वतन्त्र रूपमै मन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था छ,’ चौधरी भन्छन्,‘६ महिनापछि कि त हामी एमालेको प्रमुख ठाउँमा पुगिसक्छौं कि अर्को पार्टी बनिसक्छ।’
विवाद नटुंगिदासम्म स्वतन्त्र रूपले पनि सरकारमा जानसकिने उनको भनाइ छ।
दलको निर्णयविनै सरकारमा सहभागी हुँदा माधव पक्षबाट मन्त्री बनेकालाई कारबाहीको जोखिम मोल्नुपर्ने हुनसक्छ।
तर, माधवपक्षीय सांसद चौधरी कारबाहीको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन्।
‘दलबाट कारबाहीको सम्भावना नै रहँदैन। अहिले त ओली वा एमाले केही छैन नि,’ उनी भन्छन्,‘ओलीलाई न हामीले स्वीकार गरेका छौं न सर्वोच्चले नै। दलले निर्णय गर्न त सबै मिल्नु पर्‍यो नि।’
स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने
केन्द्रीय कमिटीले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको म्याद सकिनै लाग्दा आफूहरूले जवाफ नदिने उनले बताए। देउवालाई विश्वासको मत दिएको प्रसंग उल्लेख नगरी गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै २२ सांसदलाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
‘हामी २२ जनालाई नै किन स्पष्टीकरण सोध्नु पर्‍यो? हामीभन्दा बढी गुटबन्दी त उपाध्यक्ष कम्रडेले गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने थियो,’ चौधरी भन्छन्,‘हामीले जवाफ बुझाउँदैनौं।’